Reolink Argus 3, fakantsary fanaraha-maso somary feno | Vaovao momba ny gadget
Ny orinasa aziatika Reolink Izy dia niasa an-taonany maro tamina fakantsary marani-tsaina ho an'ny filaminanao an-trano sy ny karazana hevitra hafa tonga ao an-tsainao. Ny tsy famoahana azy farany dia tsy azo hadinoina tao amin'ny tranokalanay, izay hitahirizanay anao hatrany miaraka amin'ny fampahalalana momba ilay trano mifandray.
Jereo miaraka aminay ny tanjaka rehetra, ny tombony ary mazava ho azy koa ny lafy ratsiny. Aza adino amin'ny antsipiriany be loatra ity famakafakana lalina ity.
3 Reolink fampiharana sy fikirana
Reolink dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny fitohizan'ity vokatra ity. Na dia eo aza izany, misy zava-baovao momba ny Argus 2 izay dinihintsika eto ihany koa, ny zava-misy dia ny firafitry ny orinasa manana famolavolana azo fantarina amin'ny vokariny rehetra. Amin'ity indray mitoraka ity dia manana fitaovana miaraka amina faritra fisaka misy volo mainty isika, raha ny ao aoriana kosa feno volo fotsy mangirana. izay ahitantsika ny sary famantarana ny orinasa. Ho an'ny lamosina, faritra manerantany izay hanampy antsika hametraka azy ao amin'ny fanohanana marobe izay horesahintsika avy eo.
fandrefesana: 62 x 90 x 115 mm
Eo anoloana no misy ny LED, ny sisa amin'ireo sensor sy ny haitao natokana ho an'ny fakana sary. Ao aoriana dia misy ny seranan-tsambo microUSB izay miasa ho an'ny famatsiana herinaratra, ny fotony fametrahana ary ny mpandahateny mpampahalala. Manana bokotra "reset" eo am-potony ihany koa izahay ary koa ny bokotra on / off sy ny seranana ho an'ny karatra microSD azontsika alaina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko.
Ny palma, araka ny efa nolazainay, dia nalain'ny adaptatera manetsika izay hahafahantsika mametraka ny fakantsary amin'ny zoro maro nefa tsy misy ezaka be.
Ny sensor Starlight CMOS tompon'andraikitra amin'ny fakana ny sary, afaka manolotra famahana ny 1080p FHD miaraka amin'ny taha, eny, amin'ny 15 FPS ihany. Ny endrika horonantsary voarakitra dia ho universal sy mifanaraka, H.264.
Amin'ity tranga ity dia manana zoro 120º sy fampiasa ny fakantsary rafitra fahitana amin'ny alina be pitsiny amin'ny mainty sy fotsy amin'ny alàlan'ny LED infrared enina miaraka amin'ny fahaizana mahita hatramin'ny 10 metatra, ary koa ny rafitra fahitana amin'ny alina miloko mampiasa LED 230 lm roa miaraka amin'ny feony 6500 K izany koa dia hanolotra atiny anay hatramin'ny 10 metatra.
Manana fanamafisam-peo nomerika enina tanteraka isika amin'ny alàlan'ny fampiharana ampiasaina. Amin'ny lafiny iray dia mikrô sy mikabary hahafahantsika manana feo amin'ny lafiny roa sy hampiasa azy io ho toy ny intercom. Ho an'ny ampahany, manana rafitra mpamantatra mihetsika "PIR" azo ovaina izy miaraka amin'ny elanelana hatramin'ny 10 metatra amin'ny zoro 100º.
Izy io dia manana fifandraisana WiFi miasa amin'ny tamba-jotra 2,4 GHz miaraka amin'ny fiarovana WPA2-PSK. Amin'ny ambaratonga ara-teknika sy ara-pitaovana tsotra izao dia io no azo lazaina momba ity fakantsary ity, izay ny fanavaozana ny maodely teo aloha dia somary zara raha misy, fa ampy kosa ny mijanona ho vokatra manintona. Farany, ity fakan-tsary ity dia mifanentana tanteraka amin'ny tranon'ny mpampifandray Mpanampy Google.
Reolink fampiharana sy fikirana
Ny rindranasa Reolink dia niasa tsara ary manome interface tsara ho an'ny mpampiasa sy fahombiazana tsara amin'ny iOS sy Android, farafaharatsiny amin'ny fitsapana azonay natao:
Ny fampiharana dia hahafahantsika mifandray mivantana amin'ny fakantsary mivantana, na amin'ny alàlan'ny WiFi na amin'ny alàlan'ny angona finday. Azontsika atao ny manamboatra ny sisa amin'ny capacities ary koa mijery ny horonantsary izay efa voatahiry ao amin'ny karatra fahatsiarovana. Ankoatr'ireo hafa, ireto no fahaizana mahaliana indrindra amin'ny fampiharana:
Ampandehanana ny rafitra mpamantatra ny fihetsiketsehana izay tsy mampandeha ny fakantsary raha tsy mahita izany
Midira mivantana sy mivantana na amin'ny feo na amin'ny horonantsary ny zava-mitranga
Mifandraisa amin'ny alàlan'ny mpandahateny amin'ilay audio avoakanay amin'ny finday
Fampandrenesana momba ny fampandrenesana mihetsika
Mitahiry ny 30 segondra farany rehefa miala amin'ny fampandrenesana
Fampitandremana bateria ambany
Ataovy mandeha ho azy ny fandraisam-peo, na ny fanidiana
Mampalahelo fa tsy maintsy mandalo ny fampiharana azy isika amin'ny karazana fitantanana ny fakan-tsary, na eo aza izany, hamafiso ny endrika tsara sy ny rindrambaiko voatsinjara ananany.
Ity Argus 3 avy ao amin'ny Reolink ity dia dingana iray mandroso amin'ny alàlan'ny fanaovana ny fakan-tsarimihetsika ho tady kokoa, manome antsika ny fahafaha-misafidy panneaux solaire izay hitazona ny fitaovana hiasa hatrany, na inona na inona fiampangana ny bateria tafiditra ao. Tsy misy isalasalana, safidy hafa mahaliana ny vokatra Reolink izay mitombo tsikelikely, azonao atao amin'ny Amazon amin'ny 126 euro izany.
Navoaka tamin'ny: May 28 amin'ny 2021
Fahitana amin'ny alina
Tsy misy mpizara tafiditra
Tsy fahampian'ny FPS bebe kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Reolink Argus 3, fakantsary fanaraha-maso somary feno